Ciidamada Ammanka Kenya oo Bilaabay Howlgallo,kadib Markii ay Heeleen Warar Sheegaya in Al-shabaab ay Fulin Rabaan Weeraro argagixiso – Radio Muqdisho
Ciidamada Ammanka Kenya oo Bilaabay Howlgallo,kadib Markii ay Heeleen Warar Sheegaya in Al-shabaab ay Fulin Rabaan Weeraro argagixiso
Ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay howlgallo ka waday xaafada ay soomaalidu degto ee Islii,ka dib markii sirdoonka dowlada Kenya ay heleen warar sheegaya in 12 ka tirsan maleeshiyaadka Al-shabaab ay soo galeen dalka,kuwaasi oo isku dayaya in ay qarxiyeen xarunta baarlamaanka dalka Kenya iyo safaarada dowlada Masar ay ku leedahay magaalada Nairobi.
Dowlada Kenya ayaa si aad ah u adkeeysay ammaanka dhammaan xarumaha dowlada ee ku yaala magaalada Nairobi,si looga hortago weeraro argagaxiso oo ay kooxda Al-shabaab ka fuliso dalka.
Warar ay heleen ciidamada sirdoonka ayaa sheegaya in lix kamid ah ragga laga shakisanyahay ay soo galeen magaalada Nairobi,iyadoo aan wali la ogeyn halka ay ku suganyihiin lixda kale.
Waraaq ku taariikheysneyd 20-bishii February ee dhamaatay ayey dowlada Masar uga codsatay ciidamada ammaanka ee dalka Kenya in ay adkeeyaan ammanka safaarada ay ku leedahay magaalada Nairobi iyo sidoo kale guriga ay deganyihiin diblomaasiyiinta dalkaasi.
Wararka ay sirdoonku heleen ayaa intaasi ku daraya in kooxaha argagixisada ah ay damacsanyihiin in gaari waxyaabaha qarxa laga soo buxiiyay ku qarxiyaan xarunta baarlamaanka dalka Kenya,inkastoo aysan sirdoonku sheegin xiliga weerarkaasi la fulin rabo.
Sida ay ciidamada ammaanku sheegeen weerarkan waxaa soo qorsheeyay ninka lagu magacaabo Maxamed Maxamuud oo loo yaqaano Dulyadeen ama Gacmadheere oo ka tirsan kooxda Al-shabaab.
Maxamed ayaa horey u sheegtay mas’uuliyadda weerarkii 22 bishii November ee sanadkii 2014 ka dhacay magaalada Mandera,kaasi oo lagu xasuuqay dad shacab ah oo saarnaa bus ku soo jeeday magaalada Nairobi.
Maxamed Gacmadheere ayaa sheegay in sedax todobaad ka hor ay dalka Kenya u soo direen 12-qof ajaanib ah si ay weeraro argagixiso uga fuliyaan.
Waxaa si aad ah loo adkeeyay ammaanka xarunta baarlamaanka dalka Kenya,iyadoo la geeyay ciidamo dheeraad ah gudaha iyo banaanka xarunta baarlamaanka,si looga hor tago weeraro argagixiso oo lagu soo qaado.
Afhayeenka baarlamaanka dalka Kenya Justin Muturi ayaa qiray in la adkeeyay ammaanka xarunta baarlamaanka.
Taliyaha ciidamada booliska ee dalka Kenya Mr Samwel Arachi ayaa sheegay in la adkeeyay dhamaan xarumaha muhiimka ah ee dowlada,si looga foojignaado weeraro argagixiso.
Soomaalida ku nool kuna ganacsato xaafada Islii ayaa walaac ka muujinayo howlgallada ay ciidamada ammaanka ka wadeen xaafada labadii maalin ee lasoo dhaafay.
Wasiirka Kalluumeysiga oo kulan la qaatay xubno ka socday Hay’adda FAO
Dadka deegaanka Xiin-Dheere oo Al-shabaab la dagaalamaya